Bilaogera Iraniana Mankalaza Ny Tsingeritaona Fahaefatra Nisian-dry Zareo · Global Voices teny Malagasy
Bilaogera Iraniana Mankalaza Ny Tsingeritaona Fahaefatra Nisian-dry Zareo
Voadika ny 27 Oktobra 2017 1:08 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Aogositra 2005 ny lahatsoratra teny Anglisy)
Tiako zaraina aminareo ireo lohahevitra sasantsasany momba ny tantaran'ny bilaoginay. Mazava ho azy fa fomba manokana hijerena ny bilaogy Iraniana izany:
1- Genesisy (Fiandohana): Tamin'ny 7 septambra 2001, Salman no lasa bilaogera voalohany amin'ny teny Farsi. Andro vitsy taty aoriana, nanoratra torolàlana tsotra momba ny “Ahoana no fanaovana bilaogy amin'ny fiteny Persianina” amin'ny fampiasana ny tolotra maimaim-poana Blogger.com i Derakhshan. Manampy olona marobe (angamba an'arivony) hanomboka ny bilaoginy ao Iran ity torolalana ity. Voalaza fa maherin'ny 75000 ankehitriny ny bilaogy amin'ny teny Farsi!
2- Fibilaogiana sy ny Fonja: Maro ireo bilaogera Iraniana no mihoatra amin'ny fanaovany diary manokana. Mampahafantatra sy mizara amin'ny hafa ny vaovao sy ny hetsika ara-politika izy ireo. Maro tamin'ireo bilaogera be herimpo ireo no nigadra, tahaka an'i Motalebi sy Samininejad
3- Divay taloha tao anaty Tavoahangy vaovao: Mpanao gazety, mpanoratra sy mpanao politika marobe no lasa bilaogera DIEHARD. Abtahi, filoha lefitra teo aloha no mpanao politika voalohany namoaka ny blaoginy manokana: webnevesht. Moin, kandidà reformista tamin'ny fifidianana filoham-pirenena indray nanokatra bilaogy hifandraisana amin'ny tanora. Amin'ireo mpanoratra sy mpanao gazety, ao i Maroufi avy ao Alemaina sy Behnoud avy ao Angletera
4- Loharanom-baovao manan-danja: Indraindray ireo bilaogera mandefa sary sy vaovao alohan'ny fampahalalam-bavao mahazatra. Vao haingana i Webnameh sy Kosoof namoaka ny sarin'ireo mpanohana an'i Ganji teo anoloan'ny hopitaly sy ny tranony alohan'ireo tranonkalam-baovao hafa na gazety hafa.
5- Hezbollah & ny fibilaogiana: Ao koa ireo Hezbollah Iraniana Bilaogera. Ao amin'ny bilaogin'izy ireo tahaka an'i Mohamad Masih, manao fampielezan-kevitra marobe anti-Israely izy ireo!